October 2, 2020 - Padaethar
အမျိုးသမီး တွေကုို ဆွဲဆောင်ရာမှာ ရုပ်ရည်ထက် ပုိုပြီးအရေးကြီး အရာ ( ၃ ) ခု
October 2, 2020 by Padaethar
အမျိုးသမီး တွေကုို ဆွဲဆောင်ရာမှာ ရုပ်ရည်ထက် ပုိုပြီးအရေးကြီး အရာ ( ၃ ) ခု ရုပ်ရည်က အရေးကြီးသလားလို့ ချစ်သူရှာချင်တဲ့အမျိုးသားတွေက မေးလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခွန်းတည်းပြောရရင်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ သိပ်လှတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့ထက်အရပ်ပုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့တွဲသွားတာကို စာဖတ်သူ ဘယ်နှကြိမ်လောက် မြင်ဖူးသလဲ။ တွေ့လေ့တွေ့ထရှိတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလား။ သည်လိုပြောလို့ ရုပ်ရည်ရူပကာက လုံးဝအရေးမကြီးဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ရုပ်ရည်ချောမောလို့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို နည်းနည်းလောက် တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တယ်။ သည်လောက်ပါပဲ။ ရုပ်မချောလို့ မိန်းကလေးတွေစိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ရုပ်ရည်ဟာ အမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ အဓိကမကျရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့…. ၁. အမျိုးသမီးတွေဟာ အဆင့်အတန်းတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ် အဆင့်အတန်းဆိုလို့ အပျံစားကားကြီး စီးနိုင်တာ၊ နာမည်ကြီးတာတွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆင့်အတန်းဆိုတာ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အဆင့်အတန်းမြင့်မှုကို ဆိုလိုတာပါ။ … Read more
ကိုဗစ်ကင်းစင်ပြီး မိသားစုတွေပြန်ဆုံကြပြီဖြစ်တဲ့ ညီမလေးနွေးနွေးတို့မိသားစုအတွက် ဝမ်းသာနေတဲ့ နန္ဒာလှိုင်
ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချော နန္ဒာလှိုင်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားခဲ့တာ နှစ်အတော်ကြာအောင် ရှိနေခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးချောလေးသုံးယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကလေးတွေနဲ့ အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့မိသားစုဘဝလေးကတော့ အားကျချင်စရာကောင်းနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ နန္ဒာလှိုင်တို့ အိမ်ဟာလဲ လတ်တလောမှာ lockdown ချခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင် ကညီမဖြစ်သူနွေးနွေး ကိုဗစ်ကင်းစင်ပြီး ဆေးရုံကပြန်ဆင်းလာလို့ ဝမ်းသာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နွေးနွေးတို့မိသားစုလေးပြန်ဆုံတွေ့ကြတာကို နန္ဒာလှိုင်က “မိသားစုတွေပြန်ဆုံကြပြီကွယ် ညီမလေးမိသားစုအတွက်တော့တကယ်ကိုစိတ်ထိခိုက်ရတယ် ဒါပေမယ့်နွေးကိုတော့ယုံပါတယ်သူအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်မှာပါ၊” ဆိုပြီးတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နွေးနွေတို့မိသားစုကတော့ အိမ်ပြန်ခွင့်ရတာနဲ့ နန္ဒာလှိုင်တို့မိသားစုကို အဝေးကနေ သွားရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက် မိသားစုပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ နွေးနွေးတို့မိသားစုရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးလဲ ကိုဗစ်ကာလမှာကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ကြပါနော်…။ Swelsone News unicode ပရိသတျအခဈြတျော မငျးသမီးခြော နန်ဒာလှိုငျကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို … Read more
(၇)ရက် သားသမီးများအတွက် 01.10.2020 မှ 07.10.2020 ထိ ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် – ရွှေရမ်းထူးလင်း ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်နိုင်တီး ဒုတိယလှိုင်း စတေးဟုမ်းကာလ ၊ အေးမြစိုစွတ်သော မိုးစက်မိုးပေါက်များကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းလှသော မိုးနှောင်းကာလ အောက်တိုဘာလ၏နေ့ရက်များ ဆရာ မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း ) unicode မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ ၂၀၂၀ အောကျတိုဘာ (၁)ရကျမှ ၊ (၇)ရကျအတှငျး … Read more